ကလေးမွေးကာနီးပြီလားဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်သလဲ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ရုပ်ရှင်တွေ၊ ဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာတော့ ကလေးမွေးရတာအရမ်းမြန်ပြီးတော့ ဇာတ်ဆန်ပါတယ်။ အမေက ဗိုက်နာလာပြီးတာနဲ့ ကလေးထွက်လာတော့တာပဲ။ တကယ့်လက်တွေ့ဘဝမှာတော့ ဒီလောက်မမြန်ပါဘူး။ မွေးဖို့အချိန်ကြာပါတယ်။ ပြီးတော့ မွေးခါနီးအစောပိုင်းလက္ခဏာတွေဆိုရင် သိပ်တောင်မသိသာပါဘူး။ ဒီတော့ မွေးကာနီးမှာပြတတ်တဲ့လက္ခဏာလေးတွေကိုမေမေတွေသိထားဖို့ ပြောပြချင်ပါတယ်။
1. Effacement - သားအိမ်ခေါင်းပါးလာခြင်း
မမွေးခင်မှာဆိုရင်သားအိမ်ရဲ့အောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့သားအိမ်ခေါင်းက 3.5-4 cm ရှည်ပါတယ်။ မွေးခါနီးလာတဲ့အခါမှာ သားအိမ်ခေါင်းက ပျော့လာမယ်၊ တိုလာမယ် ပါးလာပါမယ်။ ဒီအချိန်မှာ မအီမသာခံစားရမယ့် သားအိမ်ကပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ ညှစ်တာတွေခံစားရမယ် ဒါမှမဟုတ်လည်း ဘာမှခံစားချင်မှလည်းခံစားရပါမယ်။
သားအိမ်ခေါင်းပါးလာတာကို ဆေးပညာအရဆိုရင်တော % နဲ့ပြောပါတယ်။ 0% ဆိုရင် သားအိမ်ခေါင်းက အနည်းဆုံးတော့2cm လောက်ရှည်သေးပြီးတော့ထူနေပါသေးတယ်။ ရိုးရိုးမွေးဖို့ဆိုရင် မမွေးခင်မှာ သားအိမ်ခေါင်းက 100% ပါးပြီးတိုလာရပါမယ်။
2. Dilatation- သားအိမ်ခေါင်းပွင့်ခြင်း
မွေးခါနီးနောက်ထပ်လက္ခဏာတစ်ခုကတော့ သားအိမ်ခေါင်းပွင့်လာတာပါ။ သားအိမ်ခေါင်းပွင့်တာကို ဆရာဝန်၊ ဆရာမ၊ သားဖွားဆရာမတွေက cm နဲ့တိုင်းပါတယ်။ 0cm ဆိုရင် လုံးဝမပွင့်သေးဘူး။ 10 cm ဆိုရင် သားအိမ်ခေါင်းအပြည့်ပွင့်ပြီလို့ပြောတာပါ။ ပထမပိုင်းမှာတော့ သားအိမ်ခေါင်းအပြောင်းအလဲကနှေးပေမယ့်လည်း မွေးကာနီးလာတာနဲ့အမျှပိုမြန်လာပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ သားအိမ်ထဲကိုဘက်တီးရီးယားပိုးတွေမဝင်အောင်ကာကွယ်ဖို့အတွက် သားအိမ်ခေါင်းအဝမှာ အချွဲပျစ်ပျစ်တွေနဲ့ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ မွေးခါနီးလတွေရောက်ရင် ဒီအချွဲတွေက မွေးလမ်းကြောင်းထဲကိုထွက်လာတဲ့အတွက် ပန်းရောင် (သို့) သွေးရောင်နည်းနည်းလွှမ်းတဲ့ (သို့) အကြည်ရောင် ချွဲတွေပိုဆင်းလာတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုချွဲတွေဆင်းတာက မမွေးခင် ရက်အတော်ကြာကတည်းကဖြစ်နိုင်သလို မွေးခါနီးမှလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
** သွေးဆင်းများတာကတော့ ပြသနာတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် ဆရာဝန်၊ ဆရာမနဲ့ပြသပါ။
မနက်ခင်းမှာ အားအင်တွေအပြည့်နဲ့ အိမ်မှာစားစရာတွေအပြည့်ဝယ်ဖြည့်ချင်တဲ့စိတ်၊ ကလေးအတွက် အဝတ်အစားရောင်စုံလေးတွေဝယ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့နိုးထလာတတတ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ မိခင်တွေရဲ့အာရုံရမှုပါ။ ဒီလိုစိတ်က ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဘယ်အချိန်မှာမဆိုပေါါ်လာနိုင်ပေမယ့်လည်း အချို့မိခင်တွေအတွက် ဒါက မွေးခါနီးတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပါ။ လုပ်ရမှာတွေကိုလုပ်ပါ။ ဒါပေမယ့်အားအကုန်မသုံးလိုက်ပါနဲ့၊ မွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာအားသုံးဖို့ချန်ထားပါဦး။
ကလေးခေါင်းက သားအိမ်အရိုးကွင်းထဲကိုလာစိုက်တဲ့အခါမှာ ဗိုက်ထဲမှာပေါ့သွားသလိုခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုပြောင်းလဲမှုမျိုးကို မွေးခါနီး ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကနေပြီးတော့ နာရီအနည်းငယ်အတွင်းခံစားရလေ့ရှိပါတယ်။
ကလေးလေး မိခင်ဗိုက်ထဲမှာရှိတဲ့အချိန်မှာ ရေမွှာရေတွေအပြည့်ရှိတဲ့ရေမွှာအိတ်နဲ့ကလေးကို ကာကွယ်ပေးထားပါတယ်။ မွေးဖို့စလာပြီ (သို့) မွေးတော့မယ်ဆိုရင် ရေမွှာအိတ်အမြှေးပါးပေါက်ထွက်ပြီးတော့ ရေတွေထွက်ကျလာတာကိုရေမွှာပေါက်တယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ရေမွှာပေါက်ပြီဆိုရင် မိန်းမကိုယ်ကနေပြီးတော့ ရေတွေတစ်စက်စက်ဆင်းလာတာ (သို့) ရေပွက်ခနဲဆင်းလာတာမျိုးကိုခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ရေမွှာရေဆင်းတာလား ဆီးထွက်တာလာ်း မသေချာဘူးဆိုရင်တော့ ဆေးခန်းအမြန်သွားလိုက်ပါ။
ရေမွှာပေါက်ထွက်သွားပြီဆိုရင်တော့ အချိန်ကအရေးကြီးလာပါပြီ။ ရေမွှာပေါက်ချိန်ကြာလာတဲအ့ခါမှာ ကလေးရောမိခင်ပါ ရောဂါပိုးဝင်နိုင်ချေများပါတယ်။ သူ့ဟာသူဗိုက်မနာသေးဘူးဆိုရင် ဆရာဝန်က ဗိုက်နာဖို့အတွက် ဆေးသွင်းပါလိမ့်မယ်။
မွေးဖွားခါနီးလတွေမှာ သားအိမ်ကြုံ့ပြီးတော့နာတာကို တစ်ခါတစ်လေခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ဒါတွေကို Braxton Hicks contractions လို့ခေါ်ပါတယ်။ Braxton Hicks contractions နဲ့ မွေးခါနီးလို့အမှန်တကယ်ဗိုက်နာတာနဲ့ကို ခွဲခြားတတ်ဖို့လိုပါတယ်။
• ဗိုက်နာတာ ပုံမှန်ပဲလား - ဆိုလိုတာကတော့ ဗိုက်နာတာစတဲ့အချန်ကနြေီ့ေးတာ့ နောက်တစ်ခါထပ်နာတဲ့အချိန်ကိုမှတ်ထားပါ။ နာတာကပုံမှန်ဖြစ်နေပြီးတော့ ပိုပိုတိုးလာတယ် စိပ်လာတယ်ဆိုရင် ဒါက မွေးကာနီးလို့နာတာပါ။
• တစ်ခါနာရင်ဘယ်လောက်ကြာလဲ - ဗိုက်တစ်ခါနာရင်ဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတာကိုမှတ်ထားကြည့်ပါ။ ဗိုက်တကယ်နာတာက 30-70 စက္ကန့်လောက်ကြပါတယ်။
• ဗိုက်နာတာ ရပ်သွားသလား - တကယ်ဗိုက်နာတယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပဲနေနေ၊ ဘာလှုပ်ရှားမှုပဲလုပ်လုပ် ဆက်ပြီးနာနေမှာပါပဲ။ တကယ်နာတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင် လမ်းလျှောက်လိုက်ရင်၊ နားလိုက်ရင် (သို့) ပုံစံတစ်ခုခုပြောင်းလိုက်ရင် နာတာရပ်သွားပါလိမ့်မယ်။
ဘာကြောင့်ကလေးမွေးတာကိုပိုလှုံ့ဆော်လည်းဆိုတာကို ဘယ်သူမှအတိအကျမသိသလို တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အတွေ့အကြုံတွေလည်းမတူကြပါဘူး။ တစ်ခါတစ်လေဆိုရင် ဘယ်အချိန်မွေးမယ်ဆိုတာ ပြောဖို့ခက်ပါတယ်။ မွေးခါနီးပြီးလား မနီးသေးဘူးလားဆိုတာမသေချာရင် ကိုယ့်ရဲ့ဆရာဝန်ကို ဖုန်းဆက်မေးဖို့ မကြောက်ပါနဲ့။ ကိုယ်ဝန် ၃၇ ပတ်မတိုင်ခင်မှာ မွေးဖို့လက္ခဏာတွေပြလာတယ်ဆိုရင် (သို့) ရေ၊ သွေးတစ်ခုခုဆင်းတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်၊ ဆရာမနဲ့တိုင်ပင်ပါ။
တကယ်မွေးခါနီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ ဆေးရုံသွားမိတာကလည်း ရှက်စရာမလိုပါဘူး။ ဒါက ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။
ရုပျရှငျတှေ၊ ဇာတျလမျးတှထေဲမှာတော့ ကလေးမှေးရတာအရမျးမွနျပွီးတော့ ဇာတျဆနျပါတယျ။ အမကေ ဗိုကျနာလာပွီးတာနဲ့ ကလေးထှကျလာတော့တာပဲ။ တကယျ့လကျတှဘေ့ဝမှာတော့ ဒီလောကျမမွနျပါဘူး။ မှေးဖို့အခြိနျကွာပါတယျ။ ပွီးတော့ မှေးခါနီးအစောပိုငျးလက်ခဏာတှဆေိုရငျ သိပျတောငျမသိသာပါဘူး။ ဒီတော့ မှေးကာနီးမှာပွတတျတဲ့လက်ခဏာလေးတှကေိုမမေတှေသေိထားဖို့ ပွောပွခငျြပါတယျ။
1. Effacement - သားအိမျခေါငျးပါးလာခွငျး
မမှေးခငျမှာဆိုရငျသားအိမျရဲ့အောကျပိုငျးမှာရှိတဲ့သားအိမျခေါငျးက 3.5-4 cm ရှညျပါတယျ။ မှေးခါနီးလာတဲ့အခါမှာ သားအိမျခေါငျးက ပြော့လာမယျ၊ တိုလာမယျ ပါးလာပါမယျ။ ဒီအခြိနျမှာ မအီမသာခံစားရမယျ့ သားအိမျကပုံမှနျမဟုတျတဲ့ ညှဈတာတှခေံစားရမယျ ဒါမှမဟုတျလညျး ဘာမှခံစားခငျြမှလညျးခံစားရပါမယျ။
သားအိမျခေါငျးပါးလာတာကို ဆေးပညာအရဆိုရငျတော % နဲ့ပွောပါတယျ။ 0% ဆိုရငျ သားအိမျခေါငျးက အနညျးဆုံးတော့2cm လောကျရှညျသေးပွီးတော့ထူနပေါသေးတယျ။ ရိုးရိုးမှေးဖို့ဆိုရငျ မမှေးခငျမှာ သားအိမျခေါငျးက 100% ပါးပွီးတိုလာရပါမယျ။
2. Dilatation- သားအိမျခေါငျးပှငျ့ခွငျး
မှေးခါနီးနောကျထပျလက်ခဏာတဈခုကတော့ သားအိမျခေါငျးပှငျ့လာတာပါ။ သားအိမျခေါငျးပှငျ့တာကို ဆရာဝနျ၊ ဆရာမ၊ သားဖှားဆရာမတှကေ cm နဲ့တိုငျးပါတယျ။ 0cm ဆိုရငျ လုံးဝမပှငျ့သေးဘူး။ 10 cm ဆိုရငျ သားအိမျခေါငျးအပွညျ့ပှငျ့ပွီလို့ပွောတာပါ။ ပထမပိုငျးမှာတော့ သားအိမျခေါငျးအပွောငျးအလဲကနှေးပမေယျ့လညျး မှေးကာနီးလာတာနဲ့အမြှပိုမွနျလာပါတယျ။
ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျမှာ သားအိမျထဲကိုဘကျတီးရီးယားပိုးတှမေဝငျအောငျကာကှယျဖို့အတှကျ သားအိမျခေါငျးအဝမှာ အခြှဲပဈြပဈြတှနေဲ့ပိတျဆို့ထားပါတယျ။ မှေးခါနီးလတှရေောကျရငျ ဒီအခြှဲတှကေ မှေးလမျးကွောငျးထဲကိုထှကျလာတဲ့အတှကျ ပနျးရောငျ (သို့) သှေးရောငျနညျးနညျးလှမျးတဲ့ (သို့) အကွညျရောငျ ခြှဲတှပေိုဆငျးလာတတျပါတယျ။ ဒီလိုခြှဲတှဆေငျးတာက မမှေးခငျ ရကျအတျောကွာကတညျးကဖွဈနိုငျသလို မှေးခါနီးမှလညျးဖွဈနိုငျပါတယျ။
** သှေးဆငျးမြားတာကတော့ ပွသနာတဈခုခုကွောငျ့ဖွဈနိုငျတဲ့အတှကျ ဆရာဝနျ၊ ဆရာမနဲ့ပွသပါ။
မနကျခငျးမှာ အားအငျတှအေပွညျ့နဲ့ အိမျမှာစားစရာတှအေပွညျ့ဝယျဖွညျ့ခငျြတဲ့စိတျ၊ ကလေးအတှကျ အဝတျအစားရောငျစုံလေးတှဝေယျခငျြတဲ့စိတျနဲ့နိုးထလာတတတျပါတယျ။ ဒါကတော့ မိခငျတှရေဲ့အာရုံရမှုပါ။ ဒီလိုစိတျက ကိုယျဝနျဆောငျဘယျအခြိနျမှာမဆိုပျေါါလာနိုငျပမေယျ့လညျး အခြို့မိခငျတှအေတှကျ ဒါက မှေးခါနီးတဲ့လက်ခဏာတဈခုပါ။ လုပျရမှာတှကေိုလုပျပါ။ ဒါပမေယျ့အားအကုနျမသုံးလိုကျပါနဲ့၊ မှေးဖှားတဲ့အခြိနျမှာအားသုံးဖို့ခနျြထားပါဦး။
ကလေးခေါငျးက သားအိမျအရိုးကှငျးထဲကိုလာစိုကျတဲ့အခါမှာ ဗိုကျထဲမှာပေါ့သှားသလိုခံစားရတတျပါတယျ။ ဒီလိုပွောငျးလဲမှုမြိုးကို မှေးခါနီး ရကျသတ်တပတျအနညျးငယျကနပွေီးတော့ နာရီအနညျးငယျအတှငျးခံစားရလရှေိ့ပါတယျ။
ကလေးလေး မိခငျဗိုကျထဲမှာရှိတဲ့အခြိနျမှာ ရမှောရတှေအေပွညျ့ရှိတဲ့ရမှောအိတျနဲ့ကလေးကို ကာကှယျပေးထားပါတယျ။ မှေးဖို့စလာပွီ (သို့) မှေးတော့မယျဆိုရငျ ရမှောအိတျအမွှေးပါးပေါကျထှကျပွီးတော့ ရတှေထှေကျကလြာတာကိုရမှောပေါကျတယျလို့ ချေါပါတယျ။ ရမှောပေါကျပွီဆိုရငျ မိနျးမကိုယျကနပွေီးတော့ ရတှေတေဈစကျစကျဆငျးလာတာ (သို့) ရပှေကျခနဲဆငျးလာတာမြိုးကိုခံစားရပါလိမျ့မယျ။ ရမှောရဆေငျးတာလား ဆီးထှကျတာလျား မသခြောဘူးဆိုရငျတော့ ဆေးခနျးအမွနျသှားလိုကျပါ။
ရမှောပေါကျထှကျသှားပွီဆိုရငျတော့ အခြိနျကအရေးကွီးလာပါပွီ။ ရမှောပေါကျခြိနျကွာလာတဲအ့ခါမှာ ကလေးရောမိခငျပါ ရောဂါပိုးဝငျနိုငျခမြေားပါတယျ။ သူ့ဟာသူဗိုကျမနာသေးဘူးဆိုရငျ ဆရာဝနျက ဗိုကျနာဖို့အတှကျ ဆေးသှငျးပါလိမျ့မယျ။
မှေးဖှားခါနီးလတှမှော သားအိမျကွုံ့ပွီးတော့နာတာကို တဈခါတဈလခေံစားရပါလိမျ့မယျ။ ဒါတှကေို Braxton Hicks contractions လို့ချေါပါတယျ။ Braxton Hicks contractions နဲ့ မှေးခါနီးလို့အမှနျတကယျဗိုကျနာတာနဲ့ကို ခှဲခွားတတျဖို့လိုပါတယျ။
• ဗိုကျနာတာ ပုံမှနျပဲလား - ဆိုလိုတာကတော့ ဗိုကျနာတာစတဲ့အခနျြကနွေီ့ေးတာ့ နောကျတဈခါထပျနာတဲ့အခြိနျကိုမှတျထားပါ။ နာတာကပုံမှနျဖွဈနပွေီးတော့ ပိုပိုတိုးလာတယျ စိပျလာတယျဆိုရငျ ဒါက မှေးကာနီးလို့နာတာပါ။
• တဈခါနာရငျဘယျလောကျကွာလဲ - ဗိုကျတဈခါနာရငျဘယျလောကျကွာလဲဆိုတာကိုမှတျထားကွညျ့ပါ။ ဗိုကျတကယျနာတာက 30-70 စက်ကနျ့လောကျကွပါတယျ။
• ဗိုကျနာတာ ရပျသှားသလား - တကယျဗိုကျနာတယျဆိုရငျ ဘယျလိုပုံစံနဲ့ပဲနနေေ၊ ဘာလှုပျရှားမှုပဲလုပျလုပျ ဆကျပွီးနာနမှောပါပဲ။ တကယျနာတာမဟုတျဘူးဆိုရငျ လမျးလြှောကျလိုကျရငျ၊ နားလိုကျရငျ (သို့) ပုံစံတဈခုခုပွောငျးလိုကျရငျ နာတာရပျသှားပါလိမျ့မယျ။
ဘာကွောငျ့ကလေးမှေးတာကိုပိုလှုံ့ဆျောလညျးဆိုတာကို ဘယျသူမှအတိအကမြသိသလို တဈယောကျနဲ့တဈယောကျအတှအေ့ကွုံတှလေညျးမတူကွပါဘူး။ တဈခါတဈလဆေိုရငျ ဘယျအခြိနျမှေးမယျဆိုတာ ပွောဖို့ခကျပါတယျ။ မှေးခါနီးပွီးလား မနီးသေးဘူးလားဆိုတာမသခြောရငျ ကိုယျ့ရဲ့ဆရာဝနျကို ဖုနျးဆကျမေးဖို့ မကွောကျပါနဲ့။ ကိုယျဝနျ ၃၇ ပတျမတိုငျခငျမှာ မှေးဖို့လက်ခဏာတှပွေလာတယျဆိုရငျ (သို့) ရေ၊ သှေးတဈခုခုဆငျးတယျဆိုရငျ ဆရာဝနျ၊ ဆရာမနဲ့တိုငျပငျပါ။
တကယျမှေးခါနီးမဟုတျဘဲနဲ့ ဆေးရုံသှားမိတာကလညျး ရှကျစရာမလိုပါဘူး။ ဒါက ဖွဈလရှေိ့တဲ့ အခွအေနတေဈခုပါပဲ။